Albaabka Garaashka Shiinaha ee fogaanta ee soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha AVANTI - Jos
Guriga > Alaabta > Garaashka albaabka fog > Garaashka albaabka fog ee AVANTI
Garage Door Remote ee AVANTI waa 433.92MHZ Rolling code, alaabtu waxay ku rari doontaa batari iyo tilmaamo.
Shirkadda JOS waa soo-saare xirfad leh iyo dhoofiye, oo la aasaasay 2012, waxay leedahay karti Horumarin & Cilmi-baaris u gaar ah, oo nafteena u huray inaan noqono shirkadda ugu kalsoonida badan ee tignoolajiyada sare ee albaabka Garage.
Loogu talagalay AVANTI 433.92MHz Rolling Code Garage Door Control Fonts
Wixii AVANTI 433.92MHz Rolling Code Garage Door Control Remote Control, alaabtu waxay ku soo rari doontaa batari iyo tilmaamo. Shirkadda JOS waa soo-saare xirfad leh iyo dhoofiye, oo la aasaasay 2012, waxay leedahay karti Horumarin & Cilmi-baaris u gaar ah, oo nafteena u huray inaan noqono kuwa ugu kalsoonida badan ee tiknoolajiyada sare. shirkad ku taal Garaash albaabka fog. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lammaanahaaga muddada dheer ee Shiinaha.
Sida mid ka mid ah kuwa xirfadleyda ah ee Shiinaha Garaashka albaabka fog ee AVANTI soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha, waxaan dammaanad qaadaynaa tirada badan ee gaarsiinta degdegga ah. Tayada sare Garaashka albaabka fog ee AVANTI ee lagu sameeyo Shiinaha waxa lagu habeyn karaa qiimo tartan ah oo laga keenay warshadeena. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale bixinnaa muunad iyo xirxiro bulk ah. Ku soo dhawow si aad u iibsato alaabta iibka kulul, fogaanta albaabka garaashka, fogaanta albaabka garaashka ee loogu talagalay Liftmaster, albaabka garaashka ee Chamberlain, albaabka garaashka ee Merlin, gudbiyaha, xakamaynta raadiyaha, fogaanta albaabka dabaasha, Rolling fogaanta albaabka, iwm. Iyada oo ku saleysan mabda'a kalsoonida iyo daacadnimada, waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno xiriirka iskaashiga muddada dheer ee macaamiisheena, waxaanan siin doonaa la-hawlgalayaashayada ganacsiga adeegga ugu fiican.